अनौठा कुरा Archives - Page 246 of 249 - Sawal Nepal
दुनियाकै खराब ब्वायफ्रेण्ड, जसले सुतिरहेकी प्रेमिकालाई जगाउन अजिंगर हालिदिए (भिडियो सहित)
हरेक महिलाको सपना हुन्छ की उनको पार्टनरले हरेक बिहान प्रेमपूर्ण आवाजले निद्राबाट जगाओस् र उठाओस् । तर एकजना युवतीमाथि यस्तो भयो जुन उनले न त कल्पना नै गरेकी थिइन्, न त अब कहिल्यै भुल्न सक्छिन् । ती युवतीका ब्वायफ्रेण्डले उनलाई निद्राबाट जगाउनका लागि जुन उपाय अपनाए त्यो निकै डरलाग्दो छ । गर्लफ्रेण्ड बिहान हुँदासम्म पनि
पोर्न स्टार मिया खलिफाको साउदी अरबमा अमेरिकाको राजदूत बनाउनुपर्ने माग
पोर्न स्टार मिया खलिफाको साउदी अरबमा अमेरिकाको राजदूत बनाउनुपर्ने अनलाइन याचिकामा मानिसहरुले हस्ताक्षर गरिरहेका छन् । अमेरिकामा चेन्ज डट ओआरजीमाथि यो सम्बन्धि अनलाइन याचिका चलाइएको छ । यसमा अहिलेसम्म ३ हजारभन्दा मानिसले साइन गरिसकेका छन् । मिया खलिफाले देश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई उत्कृष्ट बनाउनका लागि आफ्नो सांस्कृतिक पृष्ठभूमिको पर्वाह नगरी मानिसहरुलाई एकै साथ ल्याउनका लागि
एसपी उत्तमराज कार्कीको आदेशमा पथरी प्रहरीले सडक निर्माणमा अवरोध
शनिश्चरे,मोरङ / मोरङको पथरीशनिश्चरेस्थित गान्धीमनमोहन मार्गमा निर्माण भइरहेको सडक स्थानीय प्रहरी प्रसाशनले अवरोध पुर्याएपछि स्थानीय आन्दोलित बनेका छन् । सो सडकको रिंगुवास्थित जरायोटोल पैनीमा कल्भर्ट निर्माण कार्यलाई काठमाडौंमा कार्यरत एसपी उत्तमराज कार्कीको आदेशमा पथरी प्रहरीले सडक निर्माणमा अवरोध पुर्याएको छ । मंगलबार विहान सडक निर्माण उपभोक्ता समिति र र्यापथ्री कम्पनीका ठेकेदार पक्षले त्यहाँ कल्भर्ट निर्माण
विवाहका लागि बेहुला नै नपाएपछि…
सीरिया एउटा इस्लामिक देश हो । यहाँ विवाह गर्न योग्य पूरुषहरुको ठुलो खडेरी परेको छ । धेरै युवाहरु युद्धमा मारिसकेका छन् । भाग्न सक्ने जति विदेश पलायन भएका छन् ।देशमा चलेको गृह युद्धका कारण युवाहरु जुनसुकै पक्षको पनि शिकार भएका छन् । यसका कारण युवाहरुको संकट परेको छ भने युवतीहरुको संख्या अधिक भएको छ ।
भ्रष्टाचारविरोधी आयोगमा यी महिला
मस्को । युक्रेनमा भ्रष्टाचारविरोधी आयोगको नेतृत्व २३ वर्षकी महिला वकिल अन्ना कलिनचुकलाई दिएपछि विरोध सुरु भएको छ । पछिल्ला केही दिनयता युक्रेनको सर्वोच्च पदमा नियुक्त भएकी उनी दोस्री महिला हुन् । यसभन्दा अगाडि युक्रेनको आन्तरिक मन्त्रालयमा २४ वर्षकी नास्तासिया देयेवालाई उपमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको थियो । उनी युक्रेनी इतिहासमा सबैभन्दा कान्छी उपमन्त्री हुन् । तर, यी
अर्बपतिसँग अनुहार मिलेपछि ८ वर्षे चिनियाँ बालक रातारात स्टार
एजेन्सी । पूर्वी चीनका ८ वर्षका एक बालक रातारात इन्टरनेटमा स्टार बनेका छन् । र, यसको कारण पनि अनौठो छ । बालकको नाम फू श्या किन हो र, उनको अनुहार ज्याक मासँग मिल्छ । ज्याक त्यही व्यक्ति हुन्, जसलदे ई-कमर्स कम्पनी अलिबाबा स्थापना गरे र चीनका अर्बपति हुन् । चीनको समाजिक सञ्जालमा यो पनि हल्ला चलेको
पाँच दिनसम्म श्रीमती निर्वस्त्र हुनुपर्ने अचम्मको गाउँ
यस्तै अचम्मको एक परम्परा भारतको हिमांचल प्रदेशको मणिकर्ण घाटीको पीणी नामक एक गाउँमा छ । एक हिन्दी वेबसाइटका अनुसार यो गाउँमा पाँच दिनसम्म श्रीमती निर्वस्त्र बस्ने गर्दछिन् । यो पाँच दिनमा श्रीमान श्रीमती एक अर्कासँग कुरा र ठट्टासमेत गर्न पाउँदैनन् । ५ दिनको समयमा गाउँका कुनै पनि पुरुष रक्सी पिउन सक्दैनन् । वर्षौंदेखि चलिआएको यो
व्हेल माछाले बान्ता गर्दा तीनजना गरिब रातारात करोडपति !!
दुबई । एउटा व्हेल माछाले बान्ता गर्दा तीनजना गरिब रातारात करोडपति भएका छन् । ओमानका तीन मछुवारले व्हेल माछाले गरेको बान्ताु भेट्टाउँदा उनीहरुको भाग्य नै खुलेको हो। व्हेल माछाले बान्ता गरेर फालेको अवशेष भेट्टाएकै कारण अब उनीहरुले २५ लाख अमेरिकी हात पार्ने भएका हुन् । करिब ४० वर्षका खालिद अल सिनानीले अघिल्लो साता कुरायत प्रान्तमा
नोट साट्न लाइन बसेकी युवती अर्धनग्न बनेपछि
भारत सरकारले भारु पाँच सय र एक हजारको नोट अवैध घोषणा गरेपछि त्यहाँका बैंकहरुमा नोट साट्न लामो लाइन लाग्ने गरेको छ । यही लाइन लाग्ने क्रममा दिल्लीमा एक युवतीले हंगामा गरिन् । गत आइतबार दिउँसो एक २४ वर्षीया युवती नयाँ नोट साट्न लाइन बसेकी थिइन् । करिब ३ घन्टा लाइन बसिसक्दा पनि पालो नआएपछि उनी
वैवाहिक समारोहमै दुुलाह-दुलहीलाई सेक्स गर्न लगाएपछि…
यौनसम्वन्ध कुनै पनि श्रीमान-श्रीमतीको नितान्त निजी मामला हो । नवविवाहित जोडी त झन लजाउने नै भए । तर, यदि कुनै नविवाहित जोडीलाई सबैको अगाडी खुल्ला यौनसम्वन्ध राख्न लगाइयो भने ? चीनमा यस्तै घटना भएको छ । केही समयदेखि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एउटा भिडियोमा एक नवविवाहित जोडीलाई पाहुनाहरुले खुल्ला यौनसम्वन्ध राख्न वाध्य पारेको देख्न सकिन्छ